ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၌ ထောင်ဖောက်ပြေးရန် ကြိုးပမ်းစဉ် အကျဉ်းသား ၄ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၌ ထောင်ဖောက်ပြေးရန် ကြိုးပမ်းစဉ် အကျဉ်းသား ၄ ဦးသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး မတက်ရောက်ခြင်းသည် သပိတ်မှောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ရရှိသင့်သည့် အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုခြင်းသာဖြစ်ဟု ထုတ်ပြန်
ပုဂံခေတ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံများဖြင့် အထူးစာပို့တံဆိပ်ခေါင်းသစ် ၂ မျိုး ရောင်းချမည်
၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်အထိ ပြည်သူ၊တပ်မတော်သား၊ရဲနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း ၁၃၃၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၃၆၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိဟု ထုတ်ပြန်
KBZ ဘဏ်အား လက်နက်ကိုင် လူ၅ဦးလာရောက် ဓါးပြတိုက်ပြီး သိန်း၃၀၀၀ကျော်ယူဆောင်သွား
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းမှာ လာနီညာရာသီဥတုဖြစ်နိုင်ခြေ တွေ့ရှိရ၊ ယခုနှစ်ဆောင်းရာသီက ပုံမှန်အအေးနှင့် ဆောင်းမိုးပိုနိုင်
ယခုနှစ်မိုးရာသီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မိုးသီးနှံဧက ၇၀,၀၀၀ ကျော် ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုလုပ်ငန်းများအတွက် Myanmar Agricultural Import Registration System(MAIRS) ကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် စတင်ကျင့်သုံး
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ဗဟိုဌာန ၁၈ လအတွင်းအပြီးတည်ဆောက်မည်ဟုဆို
သဘာဝစိုက်ပျိုးသီးနှံများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် စတုတ္ထမူကြမ်းအတည်ပြုနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေ
နွေစပါး ဧက ခုနစ်သိန်းကျော်နှင့် အခြားသီးနှံ ဧက သုံးသိန်းကျော်အတွက် ဆည်ရေပေးဝေမည်ဟု ဆို
ပျူခေတ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ တွေ့ရှိခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျွန်းလှမြို့နယ် ခါချဉ်ကုန်းတောင်အား သုတေသနပြုလုပ်ရန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက ပထမအကြိမ် တရုတ်ဘာသာစကား အွန်လိုင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လောင်းလုံးမြို့နယ်တွင် တတိယမြောက် ဂဝံထုတ်လုပ်လုပ်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြထားကြောင်းဆို
သရေခေတ္တရာနန်းတော်ရာအား မြေသားစမ်းသပ်စဉ် အုတ်တန်းများ ထပ်မံတွေ့ရှိသဖြင့် သုတေသနပြုခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 တတိယလှိုင်းအတွင်း ပိုးတွေ့ရှိမှု ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် သေဆုံးမှု ၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိကြောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 တတိယလှိုင်း အရှိန်ကောင်းသည့်အဆင့်တွင် ရောက်ရှိနေကြောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲသောပိုးတွေ့ရှိသူ ၁၁ ဦး တွေ့ရှိ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် ပုဂ္ဂလိကိုယ်ပိုင်ကျောင်းသစ်ဖွင့်လှစ်လိုသူများ ဇန်နဝါရီ ၃၀ အတွင်း လျှောက်ထားနိုင်
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ၏ အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများကို COVID-19 ကာလအွန်လိုင်းသင်တန်းအဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီဒုတိယပတ်တွင် စတင်သင်ကြားမည်
အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ် ၏ အရှိန်ကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် မိုးကြီးခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးထစ်ချုန်းခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်
ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မြို့နယ်တချို့တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ရောက်ရှိ ၊ စက်တင်ဘာလတွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းအန္တရာယ် ဆက်လက်သတိပြုရန်လိုအပ်
မိုးကုတ်မြို့၌ မြေပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၁၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
မိုးကုတ်မြို့၌ မြေပြိုကျမှုကြောင့် ၄ ဦးသေဆုံးပြီး ၇ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၁၃၀၀ကျော်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနေရသူ ၄၀၀၀ကျော် အား လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပေး
NCA သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင် ၁၁၄ ဦး၏ ကြားနာစစ်ဆေးဆဲ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အမှုများ ပိတ်သိမ်း
ချင်းပြည်နယ်ရှိ လိုင်လင်းပီလေယာဉ်ကွင်းငယ် စီမံကိန်း ၇၅ ရာခိုင် နှုန်းတည်ဆောက်ပြီးစီး
ပဲခူး-ကျိုက်ထို အမြန်လမ်းမကြီးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ဆို
လက်ရှိတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ၅၆ ဒသမ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဓာတ်အား သုံးစွဲနိုင်ပြီဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ပြောကြား
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကာလအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ ၅၆၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိခဲ့ကြောင်းဆို
YBS ခရီးသည်တင်ယာဉ်များထဲမှ ၁၉၉၂-၂၀၀၃ ခုနှစ်ထုတ် ယာဉ် ၁၇၂ စီးကို တတိယသုတ်ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအဖြစ် အပ်နှံခဲ့
ထီထိုးအားမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ၂၄ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲအတွက် အရံထီအပါအဝင် ထီစာအုပ်ပေါင်း ၃,၄၃၆,၃၅၆ အုပ်အားရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းဆို
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားစီးနင်းသူဦးရေ ၄၀၀၀ ဝန်းကျင်အထိ ပြန်လည်မြင့်တက်လာ
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းသည် ၂၀၂၂ အာရှဖလားအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ခြေစစ်ပွဲအား အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံ၌ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်
၂၀၂၁ ရာသီ Myanmar National League (MNL) အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲအပါအဝင် ပြည်တွင်းဘောလုံး ပြိုင်ပွဲများအား ဧပြီလ၌ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်လျာထား
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အားကစားရုပ်သံလိုင်းမှ ရွေးချယ်မည့် Pool 8 Ball တစ်နှစ်တာ အတိုးတက်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဆု ပဏာမစာရင်းတွင် မြန်မာကစားသမား ဘုန်းမြင့်ကျော် ပါဝင်
ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အွန်လိုင်းတိုက်ကွမ်ဒိုပြိုင်ပွဲကျင်းပသွားမည်
မြန်မာတိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲ့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရန် ဇန်နဝါရီလအတွင်း စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်မည်
အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ် တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက တရုတ်-ဂျပန် ဆက်ဆံရေး၏ အဓိကဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော
တရုတ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ Payraတံတားကြီး တရားဝင် စတင် ဖွင့်လှစ်
သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ဥဇဘက် သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည့် Mirziyoyev ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့
တရုတ်လူမျိုးများက ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် လျိုဟဲ့ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen ဆက်သွယ်ဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အမျိုးသားဥယျာဉ်စနစ် ရှေ့ပြေးဇုန်များ
COP15 ၏ ပထမပိုင်းအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း၌ ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စပ်မျိုးစပါး တီထွင်ဖန်တီးသူ သိပ္ပံပညာရှင် ယွမ်လုံဖိန်
တရုတ်နိုင်ငံက မောင်းသူမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး လယ်ထွန်စက် တီထွင်ထုတ်လုပ်
၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာ မူပိုင်ခွင့်ပြပွဲအား ဟန်ကျိုးမြို့၌ ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆန်းရှီးပြည်နယ်၌ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပ
တရုတ်နိုင်ငံ၌ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက် စားကျက်မြေများ ဆက်လက် ကျယ်ပြန့်လာကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံက ကျေးလက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နောက်ထပ် အဓိကကျသည့် ကျေးရွာ ၁၉၉ ရွာအား စာရင်းတင်သွင်း
တရုတ်နိုင်ငံ လာဆာမြို့၌ “တိဘက် ငြိမ်းချမ်းစွာလွတ်မြောက်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့်” အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား ကျင်းပ
ချိန်ယွီ မြို့နှစ်မြို့ စီးပွားရေးစက်ဝန်းက တရုတ်နိုင်ငံ တံခါးဖွင့်စနစ် အခင်းအကျင်းသစ်အား ပေါ်လွင်စေ
တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင့်မြို့တွင် ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အားကောင်းလျက်ရှိ
တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ (CIIE) အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၄,၇၀၀ ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဒေသ ဟော့အယ်ကောစစ်ဂိတ်မှ ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်ဝင်/ထွက်သည့် တရုတ်-ဥရောပ ရထားအစီးရေ ၅,၀၀၀ကျော် ရှိပြီဖြစ်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထျန်းကျင်းဆိပ်ကမ်းတွင် ကာဗွန်ကင်းစင်ဆိပ်ကမ်း ဖွင့်လှစ်
ရှားပါးသော ဒိုင်နိုဆောသားပေါက် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအား တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ တွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ် ဒီဇိုင်းပုံစံ အကဲဖြတ်နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲကို ဖုရှင်းမြို့၌ စတင်ကျင်းပ
COP15 အစည်းအဝေးတွင် ကူမင်းကြေညာချက်အတည်ပြု
အထူးတံတားကြီးများ တည်ဆောက်ခြင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကျိုးရလဒ်များကို တရုတ်နိုင်ငံ လူထုက မျှဝေခံစားနိုင်လာ
သမ္မတရှီက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေး ပန်းတိုင်ရောက်ရှိရန် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်ကိုချပြ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၊ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရှီတိုက်တွန်း
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဗိုတန်-ဗီယင်ကျန်းအပိုင်း ရထားပြေးဆွဲရန် စမ်းသပ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ
Shenzhou-13 အာကာသယာဉ်မှူးများ ထျန်းကျိုး-၃ ကုန်တင်အာကာသယာဉ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်
တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းအတွက် “လန်ချန်း”ကျည်ဆန်ရထားကြီးအား ဗီယင်ကျန်းမြို့တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်
တရုတ်နိုင်ငံက ပထမဆုံး နေစကြဝဠာ စူးစမ်းလေ့လာရေးဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်
အစ္စရေးနိုင်ငံ တဲလ်အဗစ်ရှိ အပေါ့စားမီးရထားလမ်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် လျှပ်စစ်ရထား စမ်းသပ်ပြေးဆွဲမှု ပြီးစီး
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူတင်အာကာသယာဉ်Shenzhou-13 အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် လွှတ်တင်မည်ဖြစ်
တရုတ်နိုင်ငံ၌ အမျိုးသားနေ့ အားလပ်ရက်အတွင်း ပြည်တွင်းခရီးသွား ၅၁၅ သန်းထိ ရှိခဲ့
မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် တိရစ္ဆာန် အကောင်ရေ ၈,၀၀၀ နီးပါး ခွာနာလျှာနာရောဂါ ကူးစက်ခံရ
ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးရေကို သိသိသာသာလျှော့ချရန် တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြ
အိုလံပစ်မီးတောက်ကို ပေကျင်းမြို့၌ ကြိုဆို ၊ မီးတိုင်သယ်ဆောင်ရေး စတင်ဖွင့်လှစ်
၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲများအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
တစ်နှစ်ကြာ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ပေကျင်းမာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲ ယခုအောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပမည်
နေရာပြောင်းလဲမှုရှိလင့်ကစား လာမည့် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲသုံးပွဲ အနိုင်ရရှိရန် တရုတ်နိုင်ငံ ရည်မှန်းထား
၂၀၂၂ ခုနှစ် အာရှအားကစားပွဲတော် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသစ်စုဆောင်းခြင်း စတင်
ဗဟိုအမေရိကား ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၂,၀၀၀ ကျော် မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းမှ အမေရိကန်သို့ စတင်ခရီးနှင်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဂူတာရက်စ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တရုတ်-ရုရှား ပထမဆုံးအကြိမ် ပင်လယ်ပြင် ပူးတွဲကင်းလှည့်မှု အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး
ဘာရိန်းနိုင်ငံက အသက် ၃နှစ် မှ ၁၁ နှစ် အရွယ် ကလေးများအတွက် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အတည်ပြု
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာဖြင့် နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်
ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်က အမျိုးသမီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့် အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်
ကုလသမဂ္ဂ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့်တရုတ်လူမျိုးပညာရှင်များ
တရုတ်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း(CFPD)က ရန်ကုန်မြို့သစ်ရှိ အခက်အခဲရှိသူများအား စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းကူညီ
တရုတ်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း(CFPD)နှင့်အတူ အခြားအသင်းအဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ အခက်အခဲရှိသူများအား စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ကူညီလှူဒါန်း
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်သို့ လှူဒါန်းပေးအပ်သည့် ကပ်ရောဂါကုသထိန်းချုပ်ရေး အထောက်အပံ့များ စတင်ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကူညီထောက်ပံ့သော ကိုဗစ်-၁၉ Vaccine နှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကို တရုတ်-မြန်မာ ပူးတွဲကျင်းပ
တရုတ်ရိုးရာ ခြင်္သေ့စွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲ၌ L.D.C.R(C) အသင်း ချန်ပီယံ ဗိုလ်စွဲ
ရန်ကုန်မြို့၌ တရုတ် ရိုးရာ ခြင်္သေ့ ၊ နဂါး အကအလှ စွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
တရုတ် (လင်ချန်း) – မြန်မာ (လားရှိုး) နယ်စပ်စီးပွားရေးနှင့် ကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်လှစ်
တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲက တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တစ်ဆင့်တိုးတက်ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်
မြန်မာ့ရေထွက်ကုန်များအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့ တင်ပြထားကြောင်းဆို
မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အဓိကအသုံးပြုသော မူဆယ်မြို့မန့်ဝိန်းဂိတ်အား ၂၄ နာရီ အချိန် တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရက ထပ်မံလှူဒါန်းပေးအပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂ သန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့အားလုံးရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
RCEP က အာဆီယံ၏ စီးပွားရေးအား ကိုဗစ်-၁၉ မှ ပြန်လည်နာလန်ထူရန် မြှင့်တင်ပေးမည်ဟု စင်ကာပူ ပညာရှင်ပြော
COVID-19 ၊ စီးပွားရေး ပြန်လည်နလံထူရေး အာဂျင်တာများနှင့်အတူ အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ စတင်
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော “ဆေးဝါးမြို့” အား အီဂျစ်နိုင်ငံက ဒေသတွင်း ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အချာအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်
ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး အရှေ့ဂျေရုဆလင်တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား၊ ပါလက်စတိုင်း ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ဒမတ်စကပ်စ်မြို့၌ စစ်တပ်ဘတ်စ်ကား ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၁၃ ဦး သေဆုံး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှု တွေ့ရှိ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပထမဆုံး ပြည်တွင်းဖြစ်ဒုံးပျံ လွှတ်တင်
နိုင်ငံနှင့်ဒေသ ၄၆ ခုမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော ခရီးသွားများ (q)ဝင်ရန်မလိုဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုတော့မည်
ဝေလငါး အကောင် ၁၀၀ နီးပါး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် သောင်တင် သေဆုံး
ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေး မကျေနပ်၍ ဆန္ဒပြသူများက ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကားကို မင်နီဖြင့်ပက်
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ အမေရိကန်၏ လက်ဆောင်မှာ “ ဘေးဒုက္ခကြီး” ဟု ရုရှားပြော
ရုရှားက အမေရိကန်ကို မိတ်ဖက်အဖြစ် မရှုမြင်ဘဲ ပြိုင်ဘက်အဖြစ်သာ ရှုမြင်ဟု ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြား
ဒူဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရှိ သင်္ဘောတစ်စီးမှ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
အီရန်နိုင်ငံ Bushehr နျူကလီးယားစက်ရုံ “နည်းပညာချို့ယွင်းချက်” ကြောင့် ယာယီပိတ်ထား
သမ္မတပူတင်က ရုရှား-တရုတ် ဆက်ဆံရေးထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်
ပူတင်နှင့်ဆွေးနွေးပွဲသည် ကောင်းမွန်ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိကြောင်း အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
တူရကီနိုင်ငံ မာမာရာပင်လယ်၌ ကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်စင်း တိုက်မိမှု ဖြစ်ပွား
အီကွေဒေါနိုင်ငံရှိ မီးတောင်ပေါ်မှ ဆီးနှင်းရေခဲတုံးများ ပြိုကျခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံးလူ ၄ ဦးသေဆုံး
ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ပြီးမှ နေတိုးက ဆွေးနွေးဖို့ စကားပြောလာခြင်းသည် “အဓိပ္ပါယ်မဲ့”ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား
မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုအပေါ် အမေရိကန်၏ တုန့်ပြန်မှု လွန်ကဲသည်ဟု ဝေဖန်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကျွန်းစုတွင် သင်္ဘောတိမ်းမှောက်ပြီးနောက်တရုတ် နိုင်ငံသား၂ ဦး အားကယ်တင်နိုင်ခဲ့
ပင်လယ်နက်ပေါ်တွင် ရုရှားတိုက်လေယာဉ်များက အမေရိကန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များအား လိုက်ပါစောင့်ကြည့်
အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ COVID-19 Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် “AY4.2” ပထမဆုံးတွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကမ္ဘာကြီးအား အကူအညီများစွာ ပေးအပ်ထားကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ လက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော
ကနေဒါနိုင်ငံ၌ မိုင်းတွင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် မိုင်းလုပ်သား ၃၉ ဦး မြေအောက်၌ ပိတ်မိနေ
အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်တွင် ဒုက္ခသည်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်များပြားလာမှုကြောင့် အမေရိကန်က ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား နေရပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပြိုကျမည့်အန္တရာယ် ရှိနေကြောင်း WHO ပြောကြား
မက္ကဆီကို အလယ်ပိုင်းရှိ ဆေးရုံ၌ ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၁၇ ဦး သေဆုံး
ဘောလုံးဘုရင်ပီလီ၏ အူမအကျိတ်ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင် ၊ ဆေးရုံ၌ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ
Pfizer အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအား အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဟုဆို
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လူမည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကောလင်းပါဝဲလ် ကိုဗစ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ဆက်စပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံး
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ကလင်တန် တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆေးရုံမှပြန်ဆင်း
ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင် ရုရှားတိုက်လေယာဉ်က အမေရိကန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကို လိုက်ပါစောင့်ကြည့်
ရွှေဈေး ကျပ်သိန်း ၂၀ ကျော် မှ ၁,၈၀၅,၀၀၀ ကျပ်အထိပြုတ်ကျ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ယနေ့မှစ၍ နေ့စဉ် ရွှေပိသာ ၂၀ ရောင်းချပေးလျက်ရှိ
မြန်မာ့ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်၂,၂၂၀,၀၀၀ အထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်တို ၆ လ ကာလအတွင်း ကုန်သွယ်မှု ကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ဘီလီယံ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လျာထား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရွှေကုန်သည်များ၊ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်များ အား ရွှေနှင့် ကျပ်ငွေ သယ်ယူခွင့် လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး ဖော်ဆောင်မှု က အာဆီယံ နိုင်ငံများအတွက် အဆက်မပြတ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု များ ရရှိစေမည် ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ တွင် ဖော်ပြ
Asia World မြန်မာ-ENG
ASEAN Asia မြန်မာ-ENG
နီပေါနိုင်ငံ၌ ရေကြီးရေလျှံမှု ၊ မြေပြိုမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၁၀၁ ဦးထိ ရှိလာ ၊ လူပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော်အား ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အက်ထရာခန်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၃၄ ဦးအထိရှိလာ
မြောက်ကိုရီးယားက ရေငုပ်သင်္ဘောမှ ပစ်လွှတ်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်အားစမ်းသပ်ပစ်ခတ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း၌ ငလျင်များလှုပ်ခတ်ပြီးနောက် လူနေအိမ် ၁,၈၆၂ လုံး ပျက်စီး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေသည့် ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မနီလာ ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Surigao del Sur ပြည်နယ်ရှိ အကျဉ်းထောင်တစ်ခု၌ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ထွက်ပြေးရန် ကြိုးပမ်းသည့် အကျဉ်းသားများအား အကျဉ်းထောင်အစောင့်များက ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးစဉ်အတွင်း အကျဉ်းသား ၄ ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း ထောင်အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်သည် အကျဉ်းသား ၁၁ ဦးထက်မနည်းက စားဖိုဆောင်၌ နံနက်စာ ပြင်ဆင်နေသည့် အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဓားစာခံပြုလုပ်ပြီးနောက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီမတိုင်မီတွင် ယင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းထောင် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဗျူရိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
အကျဉ်းသားများသည် ဂိတ်တံခါးရှိ ထောင်အမှုထမ်း၏ လက်နက်များကို ယူဆောင်ပြီး ထောင်အစောင့်များကို ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းအကျဉ်းသားများအနက် တစ်ဦးမှာ လက်လုပ်ဆူးချွန်လက်နက် အသုံးပြု၍ ထောင်အစောင့်တစ်ဦးအား ထိုးနှက်ခဲ့သည်ဟု ဗျူရိုက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
4 inmates killed in jail break attempt in southern Philippines
MANILA, Sept. 26 (Xinhua) — Jail guards killed four inmates inashootout on Sunday after they tried to escape fromaprison in the southern Philippines’ Surigao del Sur province, jail authorities said.
The Bureau of Jail Management and Penology said the incident occurred shortly before7a.m. local time when at least 11 inmates took hostageajail staff preparing breakfast at the kitchen.
The bureau added that the inmates allegedly took the firearms of the jail personnel at the gate and used them to fire at the jail guards. One of the inmates allegedly stabbedajail guard usingablunt improvised weapon.
An investigation into the incident is underway. Enditem
Photo – Members of the Civil Disturbance Management of the Philippine National Police (PNP-CDM) line up along the street surrounding the venue of the 31st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Manila, the Philippines, November 11, 2017.(Xinhua/Rouelle Umali)
တူရကီက ရုရှားထံမှ ဒုတိယအသုတ် S-400 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဒုံးကျည်စနစ် ဝယ်ယူလို
စပိန်နိုင်ငံတွင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ပြင်းထန်လာခြင်းကြောင့် လူအများအပြားအား ဘေးလွတ်ရာသို့ အရေးပေါ် ရွှေ့ပြောင်းပေးရ